Filtrer les éléments par date : jeudi, 31 octobre 2019
jeudi, 31 octobre 2019 23:15
Ministeran’ny angovo, rano sy akoran’afo: Natao androany avy hatrany fifamindrana andraikitra
Notanterahina androany teny Ampandrianomby ny fifamindrana andraikitra teo amin’ny Minisitra nisahana ny Angovo, ny Rano ary ny Akoran'afo Vonjy Andrimanga sy ny Mpisolo toerana vonjy maika azy, ny Minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, Christian Ramarolahy.
Tapaka nandritry ny filankevitry ny minisitra omaly, araka ny tolo-kevitry ny Praiminisitra ny fanesorana ho eo amin’ny toeran’ny Minisitra nisahana ny Angovo, ny Rano ary ny Akoran'afo an’i Vonjy Andrimanga.
jeudi, 31 octobre 2019 11:29
Ikatelo- Ambatofinandrahana: Nisy nandoro ny EPP, mihahaka ny mpianatra 200 mahery
May kila hotohoto nisy nandoro ny harivan’ny alatsinainy 28 oktobra teo ny EPP ao Ikatelo, ZAP Soavina, Cisco Ambatofinandrahana. Rindrina sisa mijoro, fa lasa lavenona avokoa ny fanaka sy ny kojakojam-pianarana tao.
Trano misy efitrano efatra, izay ezaka madiodion’ny Fokonolona ny nanangana azy folo taona lasa, ity potika ity. Roanjato mahery ny ankizy tsy afaka mianatra noho ity voina ity. Baraingo any amin’ireo mpampianatra FRAM miisa fito nisahana azy ireo manoloana izao zava-mitranga izao.
Fotoam-pambolena izao aty amin’ny Faritra Amoron’i Mania, sahirana ny tantsaha ka miantso vonjy amin’ny Fanjakana hanarenana ny foto-drafitrasa sy ny fampitaovana ary handraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra FRAM.
jeudi, 31 octobre 2019 11:28
Vohémar: Mpandraharaha iray maty novonoin'ny jiolahy
Tôny, Sinoa Mpandraharaha diso fantatra eto Vohémar no maty notafihin'ny andian-jiolahy tao an-tranony ny alin'ny alarobia 30 oktobra 2019. Norobain'ireo jiolahy ny vola maty omaly tontolo andro, tao anaty baoritra.
Misokatra ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo jiolahy.
jeudi, 31 octobre 2019 10:50
Antenimieram-pirenena: Hifidy ireo depiote solontenan’ity andrimpanjakana ity ao amin’ny Fitsarana Avo
Miisa iraika ambin’ny folo ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana Avo (Haute Cour de Justice) araka ny voalazan’ny andininy faha-136 amin’ny Lalampanorenana malagasy. Ny andalana faha-4 amin’io andininy io no milaza fa solombavam-bahoaka ny roa amin’ireo mpikambana mandrafitra ny Fitsarana Avo ireo, izay fidiana amin’ny fanombohan’ny fotoam-piasan’ny Antenimieram-pirenena vaovao, toy izany koa ireo depiote roa mpisolo toerana.
Anio alakamisy 31 oktobra 2019 ity no hifidianana ireo depiote solontenan’ity andrimpanjakana ity ao amin’ny Fitsarana Avo ireo.